Vizrt mandrindra ny fahafaha-manavao ny alàlan'ny workflow ho an'ny Viz Story 2 sy Viz One 7 ary Adobe Premiere Pro | NAB Show News | 2020 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Content Creation » Vizrt dia manatsara ny fahafaha-miasa amin'ny fanovana ny Viz Story 2 sy Viz One 7 ary Adobe Premiere Pro
Bergen, Norvezy, 19 taonath Oktobra 2020—Vizrt, mpamatsy laza lehibe indrindra manerantany momba ny fitaovana fitantarana an-tsary hitan'ny mpamorona votoaty haino aman-jery (#SDVS), dia manohy manampy fahaiza-manao fanovana horonantsary matanjaka kokoa amin'ny alàlan'ny famokarana haino aman-jery miaraka amin'ny fampitomboana ho an'ny Adobe® Premiere® Pro. Ny fanovana dia apetraka eo afovoan'ny asa-tanana famoronana miaraka amin'ny famoahana vaovao farany ny fitaovana Viz Story fanovana mora ary ny mpitantana ny alàlan'ny famokarana Viz One hamaly tsara ny filan'ny mpiasa fanontana.
Mba hitsitsiana fotoana rehefa manao fanovana nefa tsy mampandefitra ny kalitao, azo atao izao ny miasa miaraka amin'ny atiny proxy video voatahiry ao amin'ny Viz One mivantana avy amin'ny Adobe Premiere Pro, fa tsy mila miditra amin'ny fitaovana avo lenta.
Midira haino aman-jery avo lenta sy proxy mivantana avy amin'ny Adobe Premiere Pro
Ny tantara namboarina miaraka amin'ny Adobe Premiere Pro dia azo ampiasaina mora foana, ovaina, havaozina taty aoriana, na soloina tanteraka mihitsy aza ho famerenana miverina amin'ny fomba mahomby nefa tsy misy fanovana tanteraka miaraka amin'ny safidy handoroana Vizrt sary an-tsary na tsia. Ny angon-drakitra Metagraphics dia entina ao amin'ny Adobe Premiere Pro rehefa manangona fitaovana avy amin'ny Viz One, manome fahafaha-manao sary farany. Ny sary nampiana tamin'ny tetikasa iray dia azo ampiasaina indray amin'ny clip iray ihany amin'ny tetikasa hafa.
Mba hampihenana ny tsingerina rehefa mikasa hamerina ny atiny efa niasa teo aloha ianao dia afaka miditra sy mampiasa indray ny tonian-dahatsoratry ny Adobe Premiere Pro Vizrt sary izay nampiana clip iray nataon'ny mpanao gazety mampiasa ny rafitry ny sary Viz Pilot Edge. Raha vantany vao vita ny fanitsiana, ny tantara dia azo alefa mivantana amin'ireo placeholder ao amin'ny Viz One hampiasaina amin'ny rundowns sy playlist ho an'ny playout mahomby.
Viz One dia manome famerenana amin'ny laoniny ny haino aman-jery ivelan'ny Internet sy arisiva ho an'ny mpanjifa fanovana Viz Story sy Adobe Premiere Pro. Ny fanatsarana mandeha ho azy dia miasa mba hamerenana amin'ny laoniny haingana ireo faritra mifandraika ilaina. Ny fihenan'ny fotoana sy ny overhead dia tena ilaina rehefa miasa lavitra. Amin'ny maody proxy dia miverina amin'ny laoniny farany ny famerenana amin'ny laoniny mba hitazomana ny fahombiazan'ny rafitra.
"Ny fanovana horonantsary dia lafiny iray manakiana ny fizotry ny asa famokarana haino aman-jery," hoy i Helen Blackburn, filoha lefitry ny Product Management ao amin'ny Vizrt. "Vizrt manampy lanja amin'ny fampidirana ireo fahaiza-manao mahavariana an'ny Adobe Premiere Pro ho an'ny fitantarana tantara tsara kokoa. ”
Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho ireo toerana ireo ao amin'ny Vizrt tranonkala:
Previous: Pixotope Version 1.4 dia mamoaka ny fahaiza-mamorona Unreal Engine 4.25 ho an'ny zava-misy mifangaro zava-misy
Next: Grass Valley dia manendry an'i Del Parks ho filohan'ny filankevitry ny mpanjifa GVX